မြစ်ဆုံ: စိတ်ကျခြင်း (DEPRESSION)
"ချော်လဲကျခြင်းသည် ရှက်ဖွယ်မဟုတ်၊ ပြန်၍ မမတ်နိုင်ခြင်းသာ ရှက်စရာဖြစ်သည်" ဟုဆိုကြသည်။
စိတ်ကျခြင်းဆိုသည်မှာ တစ်ခါတစ်ရံမှဖြစ်ရလျှင် တော်ပေဦးမည်။ သို့သော် ဘဝဆိုသည်မှာ ဤသို့ အမြဲမဖြစ်တတ်။ ဆက်ဆံပေါင်းသင်းရသူတို့နှင့် ကွေကွင်းရခြင်း၊ ဖယ်ရှားခံရခြင်းစသည့် လောက၏ အထိအဆောင့်၊ အတိုးအဝှေ့များကြောင့် ကြည်သာနေသော စိတ်ဓာတ်သည် အုံ့မှိုင်း၍ ကျဆင်းရသောအ ခါများစွာ ကြုံရတတ်လေသည်။
လူတို့မှာ စိတ်အနေအမျိုးမျိုးရှိရာတွင် တစ်ခါတစ်ရံ ခေတ္တခဏ စိတ်ဓာတ်ကျရခြင်းသည် ပုံမှန်ပင်ဖြစ် သည်။
သို့သော် မိမိတွင် ဖြစ်ပေါ်ခံစားရသော စိတ်အခြေအနေသည် သင့်တင့်ရုံမျှဖြစ်သော စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်သည်ဟု စစ်ဆေးစမ်းသပ်သော ဆရာဝန်တို့ကိုယ်တိုင်က အကဲဖြတ်လျှင် ထိုစိတ်ကျမှုအား ပြန်၍မြင့် တက်လာစေသော နည်းလမ်းများကို ကျွမ်းကျင်သူများက နည်းပေးနည်းပြ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ နာတာရှည်နှင့် ပြင်းထန်သော စိတ်ကျရောဂါမျိုးကို ခံစားနေရလျှင်သော်မှ အောက်ပါနည်းလမ်းများက သက် သာရာရကြောင်းကို ပေးနိုင်ပါမည်-
စိတ်ကျရောဂါအကြောင်း ပိုမိုသိရှိအောင် လေ့လာပြီး ပျောက်ကင်းချမ်းသာကြောင်း လက္ခဏာများ ကိုရှာကြည့်ပါ။ စာအုပ်ဖတ်ခြင်း၊ အသံသွင်းချက်နှင့် ဗီဒီယိုဖြင့် ပညာပေးချက်တို့ကိုလည်း နားဆင်၍ အား ထားနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့ လေ့လာလျှင် ထိုစိတ်အနေမျိုးမှ ကိုယ်တစ်ဦးတည်းသာ ခံစားရသည်မဟုတ်၊ကိုယ် စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်သော လက္ခဏာများသည် လူတောသူတော၌ ဖြစ်လေံဖြစ်ထများသော အခြေအနေဖြစ်သည် ကို သဘောပေါက်လာလိမ့်မည်။
စိတ်ကျရောဂါ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်သည် ဖော်ထုတ်တင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ်ကျစိတ်မှိုင်းနေခြင်းသည် မိမိ၏ခံစားချက်များကို ဖိနှိမ်ခြင်းနှင့် တိမ်မြုပ်စေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ့်စိတ်ခံစားမှုများကို အနုပညာ၊ တေးဂီတနှင့် အခြားသော ရသဖန်တီးမှု နည်းလမ်းများဖြင့် လိုက်စား၍ ဖော်ထုတ်သင့်သည်။
နေအိမ်ပြင်ပသို့ နေ့စဉ် နာရီအနည်းငယ်မျှ ထွက်ဖြစ်ဖို့လိုသည်။ တစ်ယောက်တည်းတစ်နေရာတည်း တွင်နေရပါက စိတ်ကျဖွယ်အတွေးများ၊ လက္ခဏာများကို ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် စာကြည့်တိုက်၊ စာဖတ်ခန်းများသို့ သွားပါ။ ဈေးဝယ်ထွက်ပါ။ ရုပ်ရှင်ကားသွား၍ကြည့်ပါ။စိတ်ကိုနှိုးပေးမှုဖြစ်သော Stimulation သည် စိတ်ကျလက္ခဏာရှိသူများ အတွက်အရေးကြီးသည်။ စိတ်ကိုနှိုးဆွနိုးကြားစေခြင်းသည် ဦးနှောက်ထဲရှိ စိတ်ပျော်မှုအာရုံဆက်ကြောင်း ( neurotransmitter) များ၌ ဆီရိုတိုနင် (Serotonin) ခေါ် ဓာတ်ကို စီးဆင်းစေ သည်။
ရက်သတ္တပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ်ခန့် မိတ်ဆွေများနှင့်ဆုံပါ။ လုပ်ငန်းအတွက် အစည်းအဝေးချိန်းခြင်း၊နေ့ လယ်စာဖြင့် အလုပ်သဘောညှိနှိုင်းရန် ရက်ချိန်းခြင်း သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းဆက်ရန် စီစဉ်ခြင်းတို့ကို ပုံမှမ ပြုလုပ်ဘဲ အချင်းချင်းစကားပြောဖို့၊ ရယ်မောဖို့၊ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်ဖို့ တွေ့ဆုံသင့်သည်။ ထိုအခါ ဦး နှောက်ထဲမှ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုနှင့် နေသာထိုင်သာရှိမှု အာရုံဆက်ကြောင်းများကို နိုးကြားသွက်လက်အောင် နှိုး ဆွပေးရာ ရောက်လိမ့်မည်။
ပျော်ရွှင်ပေါ့ပါးခြင်းသည် ကူးစတ်တတ်သောသဘောရှိသဖြင့် ရယ်မိပြုံးမိရန်အတွက် ရုပ်မြင်သံကြား ထဲမှာ ဇတ်မြူးကို ထိုင်ကြည့်ပါ။ ဟာသရုပ်ရှင်းကားကိုသွားကြည့်ပါ။ ပွဲခင်းထဲက လူပြက်ပြက်သည်ကိုရှုစား ပါ။
စိတ်ကူးချင်ရာ ဘာမဆိုစိတ်ကူးပါ။ စိတ်မကူးအပ်သည်ဟူသောအကြောင်းမရှိ။ စိတ်ကူးပေါ်သမျှ လက်သင့်ခံခြင်းသည် ပြီးပြီးပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားဖို့အကြောင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အတူပင် စိတ်ကူးတို့မှာ အမျိုးမျိုးပေါ်နေမည်ဖြစ်သော်လည်း မိမိကသာ မပြောင်းမလဲကျန်ရှိနေမည်ကို သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်သည်။
မိမိကိုယ်တိုင် သည်းခံစောင့်စားပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ ကိယ်ကရှေ့ တစ်လှမ်းတက်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံ နောက်သို့နှစ်လမ်းဆုတ်ရသည့် အခါမျိုးလည်းရှိမယ်သာ ဖြစ်သည်။ ပြေလည်ပြီးစီးမှုဆိုသည်မှာတစ်ဖြောင့်
တည်း တိုက်ရိုက်လာသည်မဟုတ်။ မနက်ဖြန်ဆိုသည်မှာ တစ်ဖန်ကြိုးစားခွင့်ရှိသည့် အခွင့်အလမ်းဟု မှတ်
အလုပ်တစ်လှည့်၊ နားနေခြင်းတစ်လှည့်ဖြစ်စဉ်သည် ခန္ဓာကိုယ်၏ သဘာဝစည်းချက်ကို ညီညွတ်
စေရန် အာဖြည့်ပေးသောကိစ္စဖြစ်သည်။ သာဓကအားဖြင် နေ့ စဉ် အချိန်မှန်မှန်အိပ်ရာဝင်ပြီး အချိန်မှန်မှန်
အိပ်ရာမှ နိုးကြားပြီးထရန်ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်အတွင်းစိတ်က ရှုပ်ထွေး၍ စည်းဝါးကညီဖြစ်နေလျှင် အချိန်ဇ
ယားချ၍ လုပ်ကိုင်ခြင်းက စီစဉ်တကျ ဖြစ်စေဖို့ အကြောင်းဖြစ်သည်။ အအိပ်ပျက်လျှင် စိတ်ကျလက္ခဏာ
မျိုးဖြစ်သည့် အာရုံမစူးစိုက်နိုင်ခြင်း၊ မလှုပ်ချင်မကိုင်ချင်ဖြစ်ခြင်းနှင့် စိတ်ကျလက်စ အနေအထားကို ပိုမို
ဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ ထို့ ကြောင့် အချိန်မည်မျှအိပ်မှ အိပ်ရေးဝပြီး စိတ်ကြည်လင်မည်ကို ကိုယ့်ဘာသာ
ရုတ်တရက်အမြင်၌ မယုံကြည်စရာကိစ္စမျိုးဖြစ်စေကာမူ အကောင်းမြင်ကြည့်ပါ။ ဤသို့ စိတ်ထား
နိုင်လျှင် စိတ်ကျေနပ်ဖွယ် အကြောင်းမျိုးကိုပင် ကြုံရနိုင်သည်။ အပြုသဘောရလဒ်ကို မျှော်ကိုးစိတ်ရှိပါ
လျှင် ထိုအကျိုးမျိုးရရှိစေရန် ကိုယ်တိုင်က ကြိုးစားမိဖို့ များသည်။ ထိုအခါ အခြားသူတို့ ကလည်း အ
ကောင်းမြင်၍ လာကြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ စိတ်ကူးပုံ အကောင်းအဆိုးသည် စိတ်အနေကို တိုက်
ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားတို့ မှ သတင်းများကို နားဆင်ကြည့်ရှုပါ။ သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာစောင်များ ကိုမှန်မှန်ဖတ်ရှုပါ။ ခေတ်ကာလ မျက်မှောက်ရေးရာများကို သိရှိနေခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ဘဝများနှင့် တစ်သားတည်း ဆက်စပ်သိရှိခံစားလိုက်ရမည်။ သတိထားရမည့်အချက်တစ်ချက်မှာ စိတ်မကြည်လင်စရာ သတင်းမျိုး အဖြစ်အပျက်မျိုးကို အချိန်ယူ၍ ကြည့်ရှု့ခြင်း ဖတ်ရှု့ခြင်းတို့ကို နာရီဝက်မျှထက်ပို၍ အချိန်မပေး သင့် မကောင်းသတင်းတို့ကို အကြာကြီး ထိုင်ကြည့်နေခြင်းအားဖြင့် အကျိုးမရှိနိုင်။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏ ဖေ.ဘုတ် စာမျက်နှာတွင်တင်ထားသောအတွေးအမြင်စာစုလေးဖြစ်ပါတယ်။
သူလည်း မေးလ်ထည်း မှတစ်ဆင်.ဖော်ပြထားတယ်လို. ပြောတော. မူရင်း စာရေးဆရာ ကို မသိကာ မဖေါ်ပြနိုင်၍ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ လူငယ်တွေကော လူကြီးတွေပါ ဖတ်သင်.တယ်လို.ထင်ပါတယ် ။
Posted by မောင်မောင် at 18:32